Ejipta: Bilaogera Telo Indray Voasambotra Tao Anatin’ny Iray Andro · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Bilaogera Telo Indray Voasambotra Tao Anatin'ny Iray Andro
Voadika ny 06 Aogositra 2017 17:07 GMT
Toa manambara ny fiatombohanà fanenjehana misesisesy ireo bilaogera ny andron’ny 22 Jolay 2009 tao Ejipta: bilaogera tanora telo no nosamborina taminà fotoana samy hafa. Ilay voalohany, Ahmad Abu Khalil [amin’ny teny arabo], dia nalaina tao an-tranony vao mazava ratsy. Niditra an-keriny tao an-tranony ireo mpitandro filaminam-panjakana ary nangeja ireo bokiny. Tsy nampilaza ny fianakaviany momba ny fiampangàna nihatra tamin’ny zanany izy ireo, na nilaza ny toerana hitazomana azy. Na izany aza, mety voatazona ao amin’ny birao foiben’ny filaminam-panjakana ao Nasr City izy.
Mitono-tena ho « islamista » i Ahmad, izay mitoraka bilaogy ao amin'ny Al-Bayareg [amin’ny teny arabo] (dikany: arendrina). Mitantara ny fiainany no fanaony tao.
I Abdel Rahman Ayyash [amin’ny teny anglisy] sy i Madgy Saad [amin’ny teny arabo] kosa ireo bilaogera roa hafa, izay nosamborina tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Kairo ny alin’ny 21 Jolay (2009). Niverina avy tany Torkia ireo bilaogera roa ireo. I Ayyash no mitantana ny Abdel Rahman’s Blog [amin’ny teny anglisy], ary i Madgy Saad kosa dia mandray anjara ao amin'ny bilaogy “YallaMeshMohem” [amin’ny teny arabo], (dikateny: OK tsy maninona izany ka).
Aparitak'ireo Ejipsiana bilaogera ao amin’ny Twitter ny vaovao momba ny fisamborana.
Tsy mahalala betsaka kokoa momba ireo raharaha ireo izahay aloha hatreto.
Andro vitsivitsy monja taorian’ny fanitarana fahatelo ambin'ny folo ny fitazonana an’i Mosa’ad Abu Fagr no nipoiran’ireto filazàna ireto.
Nosamborina [amin’ny teny anglisy] tamin’ny 26 Desambra 2007 i Abu Fagr. Na dia nanome didy valo famotsorana [amin’ny teny anglisy] aza ny fitsaràna sy ny mpampanoa lalàna any amin'ny distrika dia mbola any am-ponja foana izy.
Manana bilaogy iray antsoina hoe Wedna Ne3eesh [amin’ny teny arabo] (Te hiaina izahay) i Abu Fagr, mpanoratra mafana fo ao Sinay, izay ampahafantarany ny fangatahan’ireo Bédouins (Arabo mpifindra monina) ao Sinay [amin’ny teny anglisy], izay miresaka ny fiainany sy mitaky ny zom-pireneny.